Amawashi "Adriatic" - ukukhiqizwa kwe omunye liyabonakala kakhulu futhi ethandwa brand Swiss. Umkhiqizo kamakhi babe ukuklanywa kanye Sinesithakazelo kakhulu uma uqala ukumbona. Ake sibheke ukuthi iziphi izici ababonakali ngezikhundla iwashi Swiss "Adriatic", khetha izinzuzo main lokhu brand izinsimbi.
Popular nomkhiqizi amawashi Swiss yinkampani Adria & Adriatica, okuyinto yasungulwa emuva 1852. Kwakuphakathi nalesi sikhathi e-Europe kwakukhona intuthuko enenqubekela phambili isiko, yobuciko nesayensi, esangenza abasunguli inkampani ukwenza isiqalo esihle endaweni efanele. Nokho, impi ezalandela enye ngemva kwenye ekuqaleni futhi phakathi nekhulu leminyaka eledlule ophoqelelwe developers isikhathi ungasuki izinhlelo zabo.
Mass-kukhiqizwa "Adriatica" watch futhi yaze yaqala ngo-1949. izitshalo amandla Major zitholakala emizini Basel noBill. Kakade kusukela 60s kwekhulu elidlule, inkampani umkhankaso umugqa ephezulu ekupheleni ekilasini amahora. Imikhiqizo kwadingeka ozimele eyayibhalwe futhi ngajabulela funa okungavamile emakethe European.
Kamuva, umenzi unqume ukwenza intuthuko yangempela womshini amawashi. Ngenxa yesithakazelo elandayo labantu emazweni athuthukile ekuzijabuliseni asebenzayo, inkampani umkhankaso ukuthuthukiswa umugqa ezemidlalo amawashi, okuyinto khona igugu ngokuphelele emakethe emhlabeni.
Ukuphumelelisa impumelelo engakaze ibonwe utshelwa ukuphathwa inkampani ukuze sandise. Ikakhulukazi, eziningi ezintsha, ibhizinisi olwesimanje kwahlelwa abakhuluma isiNtaliyane Ticino amadolobha Donji.
Namuhla inkampani eyilungu eziqhenyayo Swiss iwashi umkhakha, kanye "Adriatica" imodeli iwashi kukhona eliphezulu kakhulu, isitayela lihle futhi ukuklanywa.
Uyabuka "Adriatic" inikezwe njengoba i asebenza ngebhethri ezintsha kanye nemikhiqizo classical lokukhanda. Yonke imikhiqizo bephethe Izikali we abahlonishwa kakhulu Swiss nomkhiqizi ETA futhi Ronda.
Kwenqwaba models awayindwayo chronographs ngomusi wemoto umsebenzi. Namasongo izindlu zenziwa of ensimbi. Ngaphezu kwalokho, metal ezizibeni abe ukwakhiwa eyodwa isiqeshana ngokuvamile iningi elikhonza isiqinisekiso ukuqina yabo nokuphila isikhathi eside.
Amawashi "Adriatic" ingaqukatha amaminerali omnene noma isafire. Bobabili izindlela okuhlala ngokwedlulele futhi amelana umonakalo lokukhanda.
Yini tesakhiwo zihlukile "Adriatica" iwashi? Izithombe onobuhle ethandwa okwethulwa kulesi impahla, asivumela ukulinganisa kanjani ukubukwa ezikhangayo imikhiqizo enjalo.
Amawashi kamakhi kukhona samuntu inhlanganisela amasiko wakudala nge okunethezeka, ezihlukahlukene wemibala futhi grandiosity isici imikhiqizo modernistic esiphezulu ekilasini.
Uma sikhuluma izinhlobo eziningi, bonke bangabafowabo ezahlukene kwezinye shades okuyisidina efanayo amacala design, okokudayila namasongo. Kodwa ngokwanele lapha kuhlanganiswe ongakhetha, ehlotshiswe amatshe ayigugu, igolide nesiliva.
Muva nje, kukhona imikhiqizo on ukudayiswa namabala obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka ewashini, ezivuma ngaphezulu yasekuqaleni "Adriatic" iwashi. Umsebenzisi Izibuyekezo abonisa ukuthi onobuhle ezifana mancane olandelanayo nalokuhlelekile. Ngakho-ke, kukhona ekahle hhayi kuphela ibhizinisi izingubo, kodwa lungasetshenziswa kanye izingubo kwansuku zonke.
Amawashi "Adriatic" ngoba amadoda inikeza umugqa zakudala futhi abayitoho. Imikhiqizo ka esigabeni sokuqala baye bazwakalisa amafomu ezinzima, inhlanganisela yendabuko imibala, imigqa, badlula imigqa. Uyabuka kamakhi endaweni nezemidlalo isitayela zihlukaniswa bomklamo ukusebenza ezibanzi.
Okwamanje, owesifazane umbusi amahora uphawu "Adriatic" akunjalo ububanzi njengoba besilisa. Nokho, kukhona inombolo kukhona elikhulu izixazululo yasekuqaleni. Ikakhulu, i-esetshenziswa kabanzi imfashini metal textile ukwelukwa namasongo, isicelo okusaqanda chassis design, ukusebenza inguqulo eyingqayizivele mshini Ukudayela.
Isici esiphawulekayo onobuhle zesifazane kamakhi wenza isethi ephelele asebenza ngebhethri ukunyakaza kuphela. Ngenxa yalokho - kukhona kungenzeka ukwenziwa izakhiwo ezicashile kakhulu futhi ngomusa.
kahle kanjani ifakwe "Adriatica" iwashi? Izibuyekezo abathengi yasekhaya abonisa ukuthi brand ethandwa imikhiqizo yasekuqaleni kudingekile ngemibhalo yomsebenzi, imfundo ngezilimi ezihlukahlukene, kuhlanganise Russian. Yonke imikhiqizo ukufinyelela emakethe emabhokisini wakuqala khona izitifiketi ezisemthethweni, iqinisekisa ukuvikelwa umthengi ngokumelene mbumbulu.
Izinzuzo amahora Adriatica
imikhiqizo Original kamakhi has izinzuzo ezilandelayo:
olungenakuqhathaniswa izindlela ngokunemba;
ukuvikeleka ngokuphelele ekulimaleni;
ezihlukahlukene ezikhexisayo izisombululo kubathandi zakudala futhi sporty.
Amawashi "Adriatic" zihlale olunembile kuzo zonke izimo. Shono imikhiqizo abadumile brand waba isihloko isithakazelo abantu ophumelela kunabo bonke ochwepheshe ku ngempela eliphezulu izesekeli.
Qhuba Oshiselelayo: ukulungiselela isampula, izici kanye nezincomo